देश विकासको गतिअनुसार इन्जिनियरको माग बढ्दै जाने होः ई. रामेश्वर रिजाल (अन्तर्वार्ता) - Engineers Post
आइबी चौधरी April 22, 2021
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका सदस्य एवं कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज (केईसी) का प्रिन्सिपल ई. रामेश्वर रिजालले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कजेज नेपाल (एकोन) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनीसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको राम्रो ज्ञान छ । इन्जिनियर्स पोस्टका आइबी चौधरीले उनै रिजालसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन्ः
पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाप्रति देखिएको विद्यार्थीको आकर्षणलाई कसरी लिनुहुन्छ ? सन्तोषजनक या फड्को मारेको छ ?
रोजगारीको अवसर र देशको आवश्यकताका हिसाबले प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । यस हिसाबले धेरै नै आकर्षण हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो छैन । यद्यपि, निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
विगतको तुलनामा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमै ३–४ हजारले प्रवेश परीक्षा दिन्थे भने अहिलेको आँकडा हेर्दा ११–१२ हजारभन्दा बढीले फाराम भर्छन् । अन्य विश्वविद्यालयमा पनि त्यही मात्रामा विद्यार्थी गएको देखिन्छ । यसरी तुलनात्मकरुपमा हेर्दा आकर्षण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तर, विगत ३–४ वर्षको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने जुन तरिकाले फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन ।
विभिन्न इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजहरू राम्रा छैनन्, विदेशमा पढ्नुपर्छ भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यो साँचो हो ?
राम्रो र नराम्रोको परिभाषा आफ्नै किसिमका हुन्छन् । विश्वस्तरको प्राविधिक शिक्षाको दाँजोमा यदि नेपाललाई तुलना गर्ने हो भने नेपालको शिक्षालाई कसैले कमजोर भनेका छैनन् । यहाँबाट स्नातक गरेर विदेश गएका विद्यार्थी चाहे विश्वविद्यालयमा होस् या लायन एजेन्सीहरूमा अब्बल दर्जाको क्षमता देखाउन सफल भएका छन् । कमिकमजोरी हरेक देशमा हुन्छन् । हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । बरु, त्यस्ता कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्छ ।
नराम्रो भन्ने ती कन्सल्टेन्सी केवल व्यावसायिक जमात हुन् । जे गर्दा आफ्नो खल्तीमा पैसा आउँछ, उनीहरूले त्यही तर्क गर्छन् । त्यो तर्कमा कति ओजन छ भनेर तपाईं हामीले नै मूल्यांकन गरौं । उनीहरूको यस्तो नकारात्मक प्रचारप्रसारले विद्यार्थीको मनलाई केही मात्रामा डाइभर्ट भने पक्कै गर्छ । तर, अहिलेका विद्यार्थी अलि बढी सचेत र जागरुक छन् । त्यसैले कन्सल्टेन्सीहरूले डाइभर्ट गरे जसरी विद्यार्थीहरू डाइभर्ट भएर पनि जाँदैनन् । हामीले यस्ता कुप्रचारको जवाफ आफ्नो संस्थालाई सबल, गुस्तरीयक बनाएर दिनुपर्छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण फेरि फैलिरहेको छ । यसले शैक्षिक सत्रमा कस्तो असर पार्ला ? विद्यार्थी पोहर जस्तै एक वर्ष ग्याप बस्नुपर्ने समस्या हल गर्न आइओईलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
हामी पढाइलाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । किनभने युवाहरूको जुन सपना छ, त्यो सपनालाई हामीले ब्रेक गरिदियौं भने फेरि जन्माउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अबको पढाइ प्रविधिमैत्री बनाउँदै लानुपर्छ । चाहे त्यो कक्षा, ल्याब, परीक्षा कन्डक्ट गर्ने सवालमा नै किन नहोस् । त्यसैले आइओईलाईलाई पनि पढाइलाई अवरुद्ध नगरी प्रविधिमैत्री हुँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्यको हो । देश विकासमा युवाहरू भनेर मात्रै हुँदैन । युवाहरूलाई जागरुक र उत्साहित बनाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले पढाइलाई नरोकी अनलाइन माध्यमबाटै भए पनि कक्षा चलाउने निर्णय गरेका छौं । सम्भव भएसम्म हामी ल्याब पनि अनलाइन नै गराउँछौं । फिल्ड भिजिटका कुरा पछि सहज भएपछि गराउँछौं ।
इन्जिनियरिङका नयाँ विषयहरू आइओईका आंगिक क्याम्पसले मात्र पढाउँछन् । निजी कलेजले पनि ती विषय पढाउनुपर्ने माग छैन तपाईंहरूको ?
माग त कति छ कति । तर, निजी कलेजहरूलाई राज्यले फराकिलो हुन दिने वातावरण सिर्जना गरेको छैन । यस्तो वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने माग हामीले निरन्तर राखिरहेका छौं । नयाँ विषयहरू हुन् वा थप कोटाहरू हुन्, त्यसमा हाम्रो माग छ । किनभने निजी कलेजहरू अगाडि बढेनन् भने नेपालको प्राविधिक शिक्षा कमजोर नै देखिने अवस्था छ ।
विषय तथा कोटा थप गर्ने कुरामा उहाँहरू अलिकति पछाडि नै हुनुहुन्छ । कलेजहरूलाई एक्सपान्ड हुन दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । लाखौं विद्यार्थीहरू विदेश जाने अनि यहाँका निजी कलेजहरू भने टाक्सेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो राष्ट्रिय सोच हुनै सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सरंक्षण गर्ने खालको नीति नल्याउने हो भने हाम्रा पदाधिकारीहरूको औचित्य नै समाप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।
इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल विषयको स्कोप राम्रो हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूको आकर्षण यसतर्फ कम देखिन्छ । किन होला ?
वर्तमान समय इलेक्ट्रोनिक्सको जामाना हो । मोबाइल कम्युनिकेसन, इन्टरनेट, अरू खालका अटोमेसनलाई हेर्दा यसको निकै ठूलो माग छ । यति ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि यसप्रति आकर्षण कम हुनु भनेको विद्यर्थीमा बुझाइको कमीले हो जस्तो लाग्छ । हुन त हामीले नै यसको महत्वबारे जसरी विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्ने हो, त्यसरी बुझाउन सकेका छैनौं । त्यसैले यतातिर आकर्षण नहुनुमा इन्जिनियरिङ कलेजकै कमिकमजोरी पनि हुनसक्छ ।
उदारहणका रूपमा भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ इलोक्ट्रोनिक्सलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यहाँ विद्यार्थीहरू पाएसम्म इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ नै पढ्न रुचाउँछन् । अहिले नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी अथवा गैरसरकारी जागिर पाएपछि मात्रै म रोजगार भएँ भन्ने खालको परिभाषा गर्ने खालका मान्छेहरू छन् । तर, स्वरोजगार बन्ने क्षेत्रमा जाने हो भने इलेक्ट्रोनिक्स एक नम्बर हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको अटोमेसनको जमानामा इलोक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङकै स्कोप बढी छ ।
अर्को कुरा, विद्यार्थीलाई यतातिर आकर्षण गर्न हाम्रा विकास निर्माणका काम तथा प्रविधि सबैलाई ‘अटोमेटाइज’ गर्न जरुरी छ । यतातिर नेपाल अझै गइसकेको छैन । जबसम्म देशले विकास निर्माणको कामका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदैन तबसम्म इलोक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग कसरी बढी हुन्छ ? हाम्रो देशमा अझै पनि सडक, पुलपुलेसा, कुलो, सिँचाइ, भवन निर्माणतिर मात्रै जोड दिइएको देखिन्छ । भवन निर्माण भइसकेपछि ढोकालाई कसरी अटोमेटिक बनाउने, अरु अपरेसनल युनिटलाई कसरी अटोमेटिक बनाउने भन्नेतर्फ धेरै काम हुन सकेको छैन । विकास निर्माण प्रविधिमैत्री भएको खण्डमा पनि यसको माग ह्वात्तै बढ्नेछ ।
प्रवेश परीक्षामा बायोलोजीका विद्यार्थीलाई पनि त्रिविका इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने माग पनि हो नि होइन तपाईहरूको ?
‘बायोलोजीकाहरूले २ स्टेप गणित लिएकै हुनुपर्छ’ भन्ने हाम्रो नियममा छ । जसले प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्छ, उसले भर्ना पाउँछ, भनिदिँदा हुन्थ्यो । धेरैजसो बायोलोजीका विद्यार्थी फिजिकल साइन्स पढेका भन्दा अब्बल छन् । यस्तो अवस्थामा बायोलोजीलाई निषेध गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । बायोलोजी पढेकाले इन्जिनियरिङ पढ्न पाइँदैन भन्ने मान्यता कहाँबाट कसरी राखियो थाहा छैन ।
हामी प्रवेश परीक्षा लिन्छौं । प्रवेश परीक्षामा एउटा सेट स्ट्यान्डर्ड कायम गर्छौं । यति गरिसकेपछि यो पढेकोले भाग लिन पाउने नपाउने भनिरहन पर्दैन जस्तो लाग्छ । यदि हामीले गणितलाई नै बढी प्राथमिकता दिने हो भने प्रवेश परीक्षा मै गणितको प्रश्न अलि बढी राखिदिए पनि हुन्थ्यो । यस्तो नियमले बायोलोजीका विद्यार्थीमाथि पक्कै अन्याय गरेको छ ।
विकासको गति र प्रविधिको विकाससँगै पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै जानु आवश्यक छ । तर, हाम्रोमा एक दशकअघिदेखिको इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । यसले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा कस्तो असर पार्छ ?
परिमार्जन नै नभएको भन्न मिल्दैन । तर, रफ्तारमा हुन सकेको छैन । प्रायः हामी इन्जिनियरिङमा के भन्छौं भने एक चक्र (४ वर्ष) पूरा भइसकेपछि पाठ्यक्रमलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । ठ्याक्कै यसरी परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन । आइसीटी सेक्टरमा त झन् वर्षैपिच्छे परिमार्जन गरे पनि ढिलो भइसकेको जस्तो छ । त्यसैले अरू इन्जिनियरिङमा पनि अपग्रेड, अपडेट हुन जरुरी छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन ढिला हुनुको एउटा मुख्य कारण हो, पाठ्यक्रम ‘रिभ्यु’ हुँदा हामी कतिपय परम्परागत शिक्षण विधि अपनाउने, पुराना विषय छोड्न नसक्ने देखिन्छ । अर्थात् लामो समयदेखि पढाएको विषयप्रति शिक्षकको लगाव हुन्छ, उसले एकैचोटी छोड्न चाहँदैन । त्यसले गर्दा पनि जुन रफ्तारमा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन ।
तर, बीसौं वर्षदेखि एउटै पाठ्यक्रम छ भन्ने चाहिँ होइन । सबैको नभए पनि कतिपय विषयको पाठ्यक्रम समयक्रममा परिमार्जन हुँदै आएको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया भने चलिरहेको छ । यो सजिलै परिमार्जन हुने कुरा पनि होइन । केही समय लाग्छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को दायराका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसको दायरा अलि फराकिलो नभएको हो कि भन्ने लाग्दैन ?
यसको दायरा फराकिलो हुन जरुरी छ । अहिले विशेषगरी इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई मात्र नियमन, अनुगमनसँगै गुणस्तरका लागि सल्लाह सुझाव दिन्छ । तर, इन्जिनियरिङ शिक्षा इतर पनि इन्जिनियरिङ छ नि । जस्तै: निर्माण क्षेत्र, परामर्श क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्र आदि ।
इन्जिनियरिङका यी सबै क्षेत्रलाई समेट्न परिषद्को ऐनले यसको बाटो खुलाएको छैन । त्यसैले त्यो परमार्जन हुन जरुरी छ । इन्जिनियरिङको सबै क्षेत्रलाई अनुगमन, व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको गुणस्तरलाई नियमन गर्ने काम परिषद्ले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आगाामी दिनमा कुनै पनि ठाउँमा इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेसागत दक्षता, मर्यादा, धर्म निभाउने कुरामा केही कमिकमजोरी हुँदा परिषद्ले कारबाही गर्ने तहमा जान्छ भन्ने आशा गरौं । यसको क्षेत्र अलि साँघुरो चाहिँ भएकै हो ।
हाल भइरहेको ‘केईसी कन्फरेन्स’ को आवश्यकता र महत्वबारे बताइदिनुस् न ?
हामी प्रत्येक वर्ष एउटा कन्फरेन्सको आयोजना गर्छौं । यसको नाम हो, ‘केईसी कन्फरेन्स’ । यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रा शिक्षक, विद्यार्थी, अनुसन्धाताहरूलाई अनुसन्धानका गतिविधिमा प्रवद्र्धन गर्नु हो । उनीहरूको खोजलाई आम मानिससम्म पुर्याउनु हो । किनभने इन्जिनियरिङको क्रेज र प्रतिष्ठा बढाउन हामीले हाम्रो क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूलाई समाजसम्म पु¥याउन जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि केईसी कन्फरेन्सको आयोजना गरिन्छ ।
यसबाहेक एउटा अर्को ‘स्किमा’ अन्तर्राष्ट्रिय कम्फरेन्स पनि छ । हामी त्यसमा पनि आबद्ध छौं । जुन प्रत्येक वर्ष हुन्छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण हुन सकेन । यसमा विश्वका करिब ५० ओटा विश्वविद्यालय सहभागी छन् । यो सन् २००८ र २०१५ मा नेपालमा भएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा रुचि जगाउनु हो ।
विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि केईसीलाई नै किन रोज्ने ? तपाईंहरूका विशेषता के छन् ?
केईसी अरू समकालीन कलेजहरू भन्दा केही कुरामा पृथक छ । पहिलो हो, यो सहरी कोलाहलभन्दा बाहिर शान्त वातावरणमा अवस्थित छ । केईसीमा विद्यार्थीहरू विभिन्न क्रियाकलापबाट विकर्षित हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा अभिभावकले एकपटक आफ्ना छोराछोरी पढ्न पठाएपछि ढुक्क हुन सक्छन् ।
अर्को भनेको हामीसँग जुन ‘फ्याकल्टी स्ट्रेन्थ’ छ त्यो समकालीन कलेजको भन्दा हाम्रो अलि बलियो छ । ल्याब एकदमै ‘स्ट्रङ’ छ । पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको सबै ल्याब केईसीसँग उपलब्ध छ ।
पढाइबाहेकका आकर्षण पनि उस्तै छ । एउटा हो, हामीले अर्गनाइज गर्ने ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम’ । यसबाट हामीले हाम्रै करिब १ सय जनाभन्दा बढी शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि छात्रवृत्तिको अवसर दिलाएका छौं ।
छात्रवृत्ति पाएर कतिले पीएचडी, कतिले मास्टर्स गर्ने मौका पाएका छन् । अर्को कुरा हामी प्राइभेट इन्स्टिच््युट त हौं तर, हामी व्यावसायिक दृष्टिकोणले मात्रै चल्न चाहँदैनौं । प्राज्ञिक मर्यादामा रहेर संस्थालाई चलाउन चाहन्छौं । अर्थात् हामी क्वालिटीलाई महत्व दिन्छौं । सबै कलेजहरूले त्यो गरेका हुँदैनन् ।
सरकार अलिकति उदार हुने हो भने हामीलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुन कुनै समस्या छैन । किनभने हामीसँग परिसर पनि प्रशस्तै छ । राम्रै कम्प्लेक्स बनाएका छौं । यिनै कुराले हामी अलि पृथक छौं जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत एक इन्जिनियरको अनुभव : ‘हामी सामाजिक बन्नुपर्ने रहेछ’